‘पागल’ गोविन्द केसी !
यज्ञराज जाेशी बिहीबार, असोज १, २०७७
प्रिय डाक्टर गोविन्द केसी! यो न्याय मरेको देश हो।
सरकारलाई हेर्दा लाग्न थालेको छ, उ आफू बसिरहेको कुर्सी झै अमूर्त र निर्जीव छ। लाग्छ उसँग न कुनै समवेदना न विवेक।
सरकारको निरीहता सिंहदरबारको नाकैमुनी टुडिखेलभरि भोकापेटमा उदाङ्गिरहेको छ।
सहयोगी मनले भात बाँडिरहेका छन्। एक्कासी भदौरे झरी झमझम झम्कियो। घन्टौ हिँडेका भोकापेट लमतन्न थिए।
र, ती भोकाहरु झरी मिसिएको पसिनाले नुनिलो भात खाइरहेका थिए।
तिनै भोकाहरुले जिताएका मन्त्री, सांसद त्यही बाटो भएर सिंहदरबारतिर चिल्ला गाडिमा कुदिरहेका देखिन्थे। उनीहरूलाई ती जनताको भोकले छोएन।
आफ्नै अघि ती भोकाहरुको पीडाले नछुने शासकलाई तिमीले देशकै दूर‌‌‌...गम... जुम्ला पुगेर १९औं सत्याग्रह थालेका छौं।
यस्तो अविवेकी जमातले भरिएको मुलुकमा तिम्रो सत्याग्रहत केवल तिम्रो अविवेकको पराकाष्टा मात्रै हो।
आफ्नै जीवनको बलिदानी हो।
पागल हौं गोविन्द केसी। तिमी ढोँगी हौ। तिमीलाई अहिले शासन सत्ताले यस्तै भनिरहेको छ। र, एक दिन तिमीलाई पागल सावित गरेरै छोड्ने छ।
प्रिय गोविन्द केसी यो तिमीले, कुलमानले अपनत्व गर्ने देश होइन। यो त जनताको म्यान्डेटलाई कुल्चेर सत्तालिप्सा भएका ‘बामदेव’हरूको देश हो। र, उनकै ‘देवगण’ प्रचण्ड–ओली जस्ताको देश हो।
डेढ दशकदेखि वीर अस्पतालको शैय्यामा ग‍ंगामाया अधिकारीसँगै न्याय छटपटाइरहेको छ। अख्तियारबाट बिदा भएका नवीन घिमिरेसँगै लाचार र लमतन्न बनेर निस्कियो न्याय। रन्जन कोइरालाहरूसँग अध्यात्ममा पनि लिप्त छ न्याय। चोलेन्द्र समशेर राणाको वरिपरी घुमिरहेको छ।
आफ्नैअघि भोकाको पीडाले नछुनेहरूलाई जुम्लाको कृष्ण मन्दिरमा तिमीले थालेको अनसनले के छोला खै?
यसअघिका अनसन झै यसपटक पनि तिमीलाई आश्वासनका लड्डु बाँडिनेछ। तिमीलाई ती अवश्य पनि मीठा लाग्ने छैनन्।
तर, तिमी त्यसलाई खान विवश हुनेछौ, फेरि पनि।
तिमीलाई खान आग्रह गरिने छ। खाएनौ भने तिम्रो मुखैमा कोचिने छ।
नपत्याए हेर त, तिमीलाई आतंककारी झै अहिले पनि बन्दुकका नालले घरिरहेका छन्। केही दिन पहिले तिमिलाई दूर...गम... का जनताको सेवा गर्दै दिइएन। औषधी किन्नै दिइएन। बसेको होटेलमै घेरा हालियो।
तिमीले बोकिरहेको औषधीको गोलीलाई पनि सरकारले बम देख्न थालेको छ।
अनि तिमी अनसन बस्ने?
तिम्रो यायावर जीनलाई त केही फरक नपर्ला!
तर, डाडाँमाथिकी घाम तिम्री आमा...! चाउरिएको आमाको अनुहारको रोदनको प्रवाह नै नगरी पटक-पटक अनसन बस्ने तिमी पागल नै हौ।
एउटी होइन, हजारौँ रोगी आमाको मुहारमा हाँसो देख्ने तिम्रो सपनालाई मिथ्या पार्नेहरूको जमात ठूलै छ यहाँ।
तिमी जोगीजस्तो बुढोको लिढे जिद्दीलाई सुकिला मुकिलाहरूका नोटले चिहान बनाएर पुरिदिनेछन्।
प्रिय गोविन्द केसी, तिम्रै भाषामा यो अत्याचारीहरुको अखडा हो। कौरबै-कौरबहरूको वर्चश्व छ यहाँ। तिमी त केवल पाण्डवजस्तै बनवासी हौ।
लडिराख! कलियुगमा पनि कतै सत्धर्म बचेको छ भने तिम्रो गुप्तवास पूरा भएपछि एकदिन पक्कै न्याय मिल्ला।
आसाको त्यान्द्रो चुँडान्न हुन्न।
अब, तिमी जसका लागि असनस बसिरहेका छौ उनीहरूका कुरा गरौं।
ति पनि तिम्रो जीवनका रमिते हुन्। तिनीहरूलाई यो यायावरले हाम्रो जीवनको लागि प्राणको आहुति गरिहरेको छ भन्ने रत्तिभर पनि थाहा छैन।
मुखमा तिम्रो नाम अनि मनमा पार्टीको भक्ति भएका जनताबाट तिमीले साथ पाउने आशा गर्नु पनि तिम्रो मिथ्या सपना हो।
तिम्रो समर्थनमा तिम्रो गुणगान गाइरहनेहरूमात्रै एकैपटक अनसनमा बस्ने हो र सडकमा आउने हो भने जाबो चार बुँदे माग चुट्कीमै पूरा हुन्छन्।
निरीह जनतामाथि रजाइ गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेकाहरूलाई नत्र तिम्रो माग सुन्ने फुर्सद नै कहाँ छ र?
लौरोको सहारा र औषधीको डोजमा शासकको सास चलेसम्म उनीहरू यस्ता आपराधिक राज गरिरहनेछन्।
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‌याएर एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरू सन्चालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‌याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
के तिम्रा यी माग नाजायज छन्? के यी सरकारका सर्मिन्दाका विषय हुन्? यी पूर्वाधार निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व होइन?
तिमीले राखेको यो माग पनि गलत नै हो त? गलत थियो भने त्यो बेला किन सम्झौता गरियो?
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
कानुन सबैका लागि होइन? तिमीले सरकार र सरकार मातहतका निकाय कानुनी रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने माग नाजायज हो? त्यसो हो भने- सत्ता र शक्तिकै भरमा जसले जे गरे पनि छुट हुन्छ?
४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि: शुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
एक जनताले आत्मदाह नै गरिसकेको अस्पतालमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अस्पताल विधिसम्मत नचलेको भन्दै विदेशी डोनेशन नै रोक्किसकेको छ। यस्तो छाडा साँढेजस्तो बनेको अस्पताललाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर निशुल्क सेवा दिनुपर्छ भन्ने माग गलत हो त?
अनि यी गलत हैनन् भने सही के हो? यसको उत्तर राज्यले दिनुपर्दैन?
किन पटक-पटक गोविन्द केसी र जनताका भावनामाथि कुठाराघात गरिरहेको छ सरकारले?
अब यसको उत्तर खोज्न ढिला गर्नुहुन्न।
नत्र केसीको जीवन हाम्रो लागि लड्दालड्दै अनसनमै अन्त्य हुन के बेर?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०७७
चौबिस घण्टामा १७ जना संक्रमितको मृत्यु, झन्डै १५ सयमा संक्रमण पुष्टि
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक चौबिस घण्टामा देशभर ११ हजार ४ सय ४९ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो। आयोमेल संवाददाता
सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गाबी अस्खेनाजीले हस्ताक्षर गर्ने तेलअभिभस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिए। रासस
‘सिसौका रुख प्रदेश सांसद वृख प्रधानले नै काट्न लगाएका थिए’
झापा क्षेत्र नम्बर २ (ख) का प्रदेश सांसद प्रधानले सुकेका, पोचिएका भनेर काट्न लगाएका हुन्। रुख काट्न लगाउँदा उनले पार्क व्यवस्थापन समिति र आफूबीच सल्लाह भएको भनेर मजदुरलाई ढाँटेका थिए। स्थानीय जक्कु राजवंशीले जिल्ला वन कार्यालयलाई रुख काटिँदै गरेको खबर गरेका थिए। राजेन्द्र गाैतम